C/qawi Axmed Yuusuf oo loo doortay garsooraha maxkamadda cadaaladda adduunka – Radio Daljir
C/qawi Axmed Yuusuf oo loo doortay garsooraha maxkamadda cadaaladda adduunka
Noofember 10, 2017 7:33 b 0
C/qawi Axmed Yuusuf oo ah muwaadin dhalasho ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaa noqday garsooraha Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee fadhigeedu yahay magalaada Hague ee wadanka Holand.
Doorasho kadhacday xarunata QM ee Newyork ayuu ku helay codad dhan 42- xubnood, isagoona ka mid noqday shan garsoore oo cod loo qaaday doorashada NewYork.
C/qawi oo sidoo kalle ah madaxwayne kuxigeenka Maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda Adduunka ayaa horay uga soo qabtay shaqooyin kalle duwan garsoorka caalamiga, sidoo kalena waxaa uu soo noqday guddoomiyihii guddigii dhisay cahdigii Puntland ay ku shaqaynaysay 1998dii ilaa iyo 2005tii xiligaasi oo la bilaabay samaynta dastuur Puntland ay leedahay oo ugu dambayntii la ansixiyay 18,April,2012.
Taariiqdiisa oo kooban Xaakim Cabdulqawi Axmed Yusuf
Xaakim Cabdulqawi Axmed Yuusuf waxa uu ku dhashay magaalada Eyl 12kii September 1948. Waxa uu waxbarashadiisii hoose dhexe illaa heer Jaamacadeed ku soo dhamaystay dalka Soomaaliya isagoo ka qalin jebiyay Jaamacada Ummada waxana uu waxbarashadiisii taqasusiga ku soo qaatay jaamacad ku taal Florence dalka Talyaaniga. Xaakimka ayaa ku hadla luqadaha Somali,Carabi,English,French iyo luqada Talyaaniga.
Xaakim Yuusuf ayaa waxaa uu hore u soo qabtay xilal caalami ah waxaana ka mid ah:
March 2001-January 2009 La taliyaha arrimaha sharciga ee hay’ada UNESCO.
1994–1998 waxa uu ahaa La taliyaha arrimaha sharciga iyo kaaliyaha agaasimaha guud ee arrimaha Africa hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta warshadaha(UNIDO).
1998–2001 Wakiilka iyo madaxa xafiiska New York ee ururka Shirweynaha ganacsiga iyo horumarinta (UNCTAD)
1992–1994) Madaxa arrimaha sharciyada ee UNCTAD
1987–1992 Barre Jaamacada Ummada kuliyadeeda Sharciga
1974–1981 Barre Jaamacada Geneva
1981–1983 Guddiga Soomaaliyeed ee shirka 3aad ee Qaramada Midoobay arrimaha sharciga badaha.
Xaakimka ayaa waxa uu buugaag badan ka qoray arrimaha sharciga caalamiga waxana uu ka mid yahay dadka ugu qorista badan ee caalamka wax ka qora arrimaha sharciga.
Mareykanka oo sheegay duqayn inuu ku dilay dagaalamayaal katirsan Al-Shabaab
Hiigsi & Hayaan: Taxanaha 31aad iyo Cabdifataax Cumar Geeddi (dhegayso)